Fekitori yedu yanga iri makore gumi, uye isu tiri kugara tichiedza nepese kupa zvigadzirwa izvo zvakakwana kune mutengi wedu, isu tinotarisa chidimbu chega chega tisati tatumira kunze, tinotarisira kuti chidimbu chega chega paruoko rwemutengi wedu chakanaka uye chakaringana Asi isu tinoziva izvo chete zvine chembere zvigadzirwa hazvikwani, kuitira kuti upe zvimwe sarudzo kuti vatengi vasarudze.Gore rino takagadzira zvinhu zvitatu, zvinhu izvi zvine zvemazuva ano chitarisiko amd chakasimba function.Two zvidimbu zvemhepo compressor uye chimwe chidimbu chevharidzi yekuchenesa, ngatitarise.
CY102-16, ichi chinhu chakapetwa humburumbira mweya compressor, ese masimbi masimbi ane simba rakasimba.it inoita kunge odhiyo, ine LED kuratidza, zviri nyore kuti zvishandiswe, uye kumiswa otomatiki, kunopa mutengi kunzwa kuri nani kwekushandisa. gadzira mavara akasiyana kune vatengi, chigadzirwa chichava chakanaka kwazvo.
Chinhu ichi changopedzwa kugadzira, isu tichagadzira morden dhizaini uye diki muviri wayo, saka zvichave nyore kwazvo kutakura, kana mutengi achida, isu tinogona kuisa bhatiri mukati, inogona kudzoreredzwa ne USB nechero plug. sezvo yaigona kushandiswa pasina waya, iri nyore uye inogona kuchengetedza nguva yakawanda kune vanocheka .kunyange iri diki, zvakare inogona kukwidza vhiri munguva pfupi.Usanetseka pamusoro pemutengo, ichiri inokwezva.
VC-113 chitsva chinotsvaira, chiri nemuviri mudiki, uye simba rakakura rekuyamwa, zvinoita kunge mukombe, iwe waunogona kuisa chero kwaunoda, pachigaro chemota kana pasofa pamba, haimboregi iwe pasi nekuda kwechitarisiko chakanaka.it zviri nyore kwazvo kubvisa guruva uye granule, kunyangwe iyo kofi iyo yadeurwa zvisina hanya.Tinogona kuita akawanda akasiyana mavara kumutengi, uye tinodhinda logo pane muviri wezvigadzirwa.
Mugore idzva, taigona kushandira pamwe nevamwe vatengi uye kuva nedzimwe shamwari kubva pasirese, ndinotenda rinenge riri gore rakanaka!